SAMSUNG Galaxy Note4အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Nay Min Maung
ကြည့်သူအရေအတွက်: 377 (+3)
PH . 09964503956 PH . 09781632348 (ရန်ကုန်)
SAMSUNG Galaxy Note4(အနက်ရောင်)
Ram3Rom 32 Finger good
Error လုံးဝမရှိ အလုံးရှယ်သန့်ဘက်ထရီခံ
ဈေးနူန်း = 148000 ks
Ph . 09964503956